အားကစားကွင်းကိုယ်ရေးရာဇဝင် : Maracana Stadium ,Rio de Janeiro | Liga123 Database
အားကစားကွင်းကိုယ်ရေးရာဇဝင် : Maracana Stadium ,Rio de Janeiro
ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 | 07:14 ICT
Av. Pres. Castelo Branco, Portão3- Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, 20271-130, Brasil
- Estádio Jornalista Mário Filho၊ EstádioMaracanã၊ Maracanãသို့မဟုတ် Maraca ရိုးရိုးလူသိများသောရီယိုဒီဂျနေရိုရှိအားကစားကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအားကစားကွင်းဟာMaracanãzinhoဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ်တူဂီဘာသာဖြင့် "Little Maracanã" ကိုဆိုလိုတာပါ။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးပြည်နယ်အစိုးရ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယခုအားကစားကွင်းကို Flamengo နှင့် Fluminense ကအသီးသီးစီမံခန့်ခွဲသည်။ ၎င်းသည်ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြစ်ရှိယခုအခါတူးမြောင်းဖြစ်သောရီယိုမာရာကာနာအမည်ရှိMaracanãရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသည်။
- ဥရုဂွေးမှဘရာဇီးကို ၂-၁ ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည့် FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင်ကြည့်ရှုသူ ၁၉၉,၈၅၄ ယောက်ရှေ့တွင်အားကစားကွင်းကို ၁၉၅၀ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပွဲချိန် ၂၆ ကြိမ်၊ နောက်ဆုံး ၁၉၈၃ ခုနှစ်မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Flamengo မှ Santos, 3-0 ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရာ ၁၅၅,၂၅၃ ယောက်ကြည့်ခဲ့သည်။ အားကစားကွင်း၌လူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် ၂၈၄ ကြိမ်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ သို့သော်လှေခါးထစ်နေရာများကိုထိုင်ခုံများဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်မူရင်းစွမ်းရည်ကိုလက်ရှိ ၇၈,၈၃၈ သို့လျှော့ချသော်လည်းဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးတွင်အကြီးဆုံးအားကစားကွင်း ရီယိုဒီဂျနေရိုရှိအဓိကကလပ်အသင်းများဖြစ်သည့် Flamengo, Fluminense, Botafogo နှင့် Vasco da Gama စသည့်ဘောလုံးပွဲများအတွက်အားကစားကွင်းကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ ပွဲတော်များနှင့်အခြားအားကစားပွဲများလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။